Mitsipaka ny Lalàna Mety Hitarika Mankany amin’ny Kolikoly ny Filoha Vaovao ao Bolgaria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Febroary 2017 5:19 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, Български, Español, Ελληνικά, English
Pikantsary tao amin'ny President.bg, mampiseho ny CV ofisialin'ny filoha Boligara Rumen Radev, milaza ny antsipirian'ny asany tamin'izy mpanamory fiaramanidina sy manamboninahitra ambony . Mbola tsy misy amin'ny teny Anglisy ny pejy.
Nahazo filoha vaovao ny Boligara ary manara-maso izay rehetra ataony izy ireo. Raha miahiahy momba an'i Donald Trump ao Etazonia izao tontolo izao, nandresy tamin'ny fifidianana tamin'ny Novambra farany teo kosa i Rumen Radev, kandidà mahaleotena nahazo ny fanohanan'ny Antoko Sosialista Boligara. Nandray ny toerany tamin'ny fomba ofisialy izy tamin'ny 22 Janoary teo.
Iray tamin'ireo hetsika voalohany nataony, folo andro taorian'ny fitokanana azy ny fitsipahana ny lalàna antsoina hoe Lalànam-Panomezana Alalana Vaovao, izay mifehy ny fifampiraharaham-barotra amin'ny orinasa mikirakira ny harena voajanahary, tahaka ny rano fisotro. Nolaniana tamin'ny fotoana farany talohan'ny fandravana ny parlemanta teo aloha io lalàna io. Ahitana ny fanafoanana fifanekem-panomezana alalana maharitra 35 taona fara fahabetsany izany ary manome zo hanokatra dingam-panomezana alalana ho an'ny minisi-panjakana sy ny ben'ny tanàna.
Na dia nanohana ny lalàna aza ny antokon'ny fitondrana teo aloha, nanohitra ny fandaniana azy noho ny antony samihafa kosa ny fikambanana mpiaro ny tontolo iainana, ny sendika sy ny antoko nasionalista elatra havanana. Noho ny zava-niseho ara-politika taorian'ny naha-voafidy an'i Radev sy ny hatezeram-bahoaka noho ny kolikoly izay nanampy haingana tamin'ny fiakarany teo amin'ny fitondrana, dia hita fa fandrosoana lehibe ny fitsipahana tamin'ny alalan'ny vato tsy azo ivalozana sy ny fanohanana azony avy amin'izany manerana ny sehatra politika.
Nanao ny fanoherana ireo fikambanana mpiaro ny tontolo iainana, nilaza fa manome zo midadasika ho an'ireo nahazo ny fanomezana alalana ilay lalàna vaovao, araka ny notaterin'ny sampam-pampitam-baovaom-pirenena BTA. Nanamafy ny mpiara-dia ankavanana ao amin'ny Repoblika Vaovao fa manome tombontsoa ho an'ny orinasa ilay lalàna ary nokendrena hanamafy ny tombontsoa ara-bolan'ny fanomezana alalana asam-panadiovana an-tanandehibe ho an'ny “orinasa mpanao izany tokoa” mandritra taompolo maromaro ho avy. Na ny Repoblika Vaovao ny ny sendikà Podkrepa dia samy nnambara fa nolanian'ny Parlemanta haingana tao anatin'ny fe-potoam-piasany farany ilay lalàna. Nanohana ilay fitsipahana tamin'ny alalan'ny vato tsy azo ivalozana azy amin'ny maha fepetra miady amin'ny kolikoly azy ny filoha teo aloha Georgi Parvanov (2002-2012), ary niarahaba an'i Radev amin'ilay antsoina hoe fepetra hiarovana ny fananam-panjakana sy ny tombontsoam-bahoaka kosa ny filohan'ny Antoko Sosialista Boligara, Kornelia Ninova.
Nanamarina ny fanapahan-keviny hitsipaka, amin'ny vato tsy azo ivalozana, ny lalàna ny Filoha Radev, tamin'ny filazana fa “mety hanokatra varavarana mankany amin'ny kolikoly” ilay lalàna ary mitaky fanovana ireo lalàna 29 hafa, izay nolazaina fa mety ho azo tanterahina ihany aorian'ny “adihevitra goavana dia goavana.” Nanoritra i Radev fa ilaina hifanaraka amin'ny torolalana vaovao avy amin'ny Vondrona Eoropeana ny lalàna nohavaozina, na mety mora hiharan'ny sazy avy amin'i Bruxelles ny toekaren'i Boligaria.
Nampitandrina ny mety hisian'ny sazy avy amin'ny Vondrona Eoropeana ihany koa ny hafa raha tsy mifanaraka amin'ny fitsipika vaovaon'ny fampitaovan-draharaham-panjakana haingana ilay lalàna. Nilaza izany imbetsaka tamin'ny antsafa tamin'ny fahitalavitra i Emil Radev, solontenan'ny antokon'ny fitondrana teo aloha GERB sy ny mpikambana ao amin'ny Parlemanta Eoropeana tamin'ny 3 Febroary.
Raha tsy nahavita nitatitra lalindalina momba ilay lalàna ny fampahalalam-baovao mahazatra ao Boligaria, dia nanadihady ny fizotran-draharaha tamin'ny antsipiriany ny adihevitra parlemantera momba ny Lalànan'ny Fanomezana alalana talohan'ny vato fitsipahana tsy azo ivalozana ny vondrona iray ahitana olom-pirenena efatra, ary nanasa an'i Radev tao amin'ny tranonkalam-baovao Bultimes.bg mba hanohitra izany. Nandresy lahatra ny vondrona fa tsy nahavita niaro ny tombontsoam-bahoaka mikasika ny mangarahara sy ny fanarahamaso ny fifanekena momba ny fanomezana alalana ny lalàna.
Olom-pirenena iray hafa, antsoina hoe Nikolaï Krumov kosa, naneho hevitra tao amin'ny Facebook momba ny olana ateraky ny fanafoanana ny famerana ny faharetan'ny fanomezana alalana:
Ny fanomezana alalana tsy manam-pahataperana dia mitovy amin'ny hoe lasa tompon'ilay fananana. Ny fanitarana ny fe-potoana ho tsy manam-pahataperana dia fomba hanomezana ho an'ny tsy miankina ny tolotra, ny zo ary ny asa, izay iantohan'ny fiarahamonina ho an'ny olom-pireneny nefa tsy amidy ireo!
Lehibe ny zavatra andrasana amin'i Radev. Araka ny nolazain'ny BBC, ny fiakaran'i Radev teo amin'ny fitondrana “dia fanehoana ny fielezan'ny fahatezerana tamin'ny tsy fahombiazan'ny governemanta teo aloha tamin'ny fiadiana tamin'ny kolikoly sy ny fahantrana”. Manoloana ny zava-misy, nahasarika ny olona hijery ny fotoana voalohany nitondrany raha nanomboka nanendry governemanta vonjimaika izy, izay tsy maintsy hisahana ny fifidianana mialoha amin'ny volana Martsa.
Raha hita fa hangotraka resaka ny fe-potoam-piasan'i Radev, dia naneho ny fanantenany tamin'ny dingana voalohany nataon'ny filoha vaovao eo amin'ny fitondrany kosa ny sasany tahaka an'i Janeta Dineva :
Nandritra ny folo andro, tsy vitany hoe nahavita nanangana ny iray amin'ireo governemanta voalanjalanja indrindra i Radev, tsy vitan'ny hoe mba handeha any Bruxelles sy haneho amin'ny fomba hentitra ny fanirian'i Boligaria, fa indrindra mba hametraka ny vato fitsipahana tsy azo ivalozana voalohany indrindra!